“नेताहरुले गरेका अनेकौं अनि’यमितताको छानबिन कस्ले गर्ने? ज्वाला लगायत टिमलाई फसाउने कार्य हुँदै नहोस्”- हेमराज थापा – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
काठमाडौं । विध्यार्थी साथै प्रखर रुपमा बेथितिहरु बिरिद्वमा आफ्नो आवाजहरु बुलन्द गर्दै आएका हेमराज थापाले ज्वाला संग्रौला सहित टिमको निष्पक्ष छानबिन गर्न जोड दिएका छन् । नेता तथा कार्यकर्ताले अनेकौं गरेका किन छानवीन हुन्न भन्दै आक्रोशीत हुँदै यो यो विषयमा छानबिन कहिँले भन्दै सरकारलाई यसरी प्रश्न सामजिक संजाल मार्फत गरेका छन् ।
थापाले लेखेका छन् :”खुस्बु घिमिरे पिटेको छानबिन गरौँ,रँगभेदी टिप्पणीको छानबिन गरौँ,समाजसेवा गर्दा आधा खल्तिमा हालेको छानबिन गरौँ दोषीलाई कारबाही गरौँ ,कम’जोरी भए कारबाही भोग्न हामी तयार छौँ ।तर महाकाली बेचेको छा’नबिन हुन्छ कि नाई? नागरिकता बेचेको छानबिन हुन्छ कि नाई?
लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानी बेचेको छानबिन हुन्छ कि नाई?नदिहरु बेचेको छानबिन हुन्छ कि नाई? चुरेको गिटि बालुवा बेचेको छानबिन हुन्छ कि नाई?? बालुवाटारको जग्गाको छानबिन हुन्छ कि नाई? 70 करोडको छानबिन हुन्छ् कि नाई? वाइडबडिको छानबिन हुन्छ कि नाई? स्विस बैंकको खरबौँ रुपैयाँको छानबिन हुन्छ कि नाइ? उजुरि लिइन्छ्की नाई ?दो’षिलाई कार’बाही हुन्छ कि नाई?
राजा बिरेन्द्रको हत्याराको छानबिन हुन्छ कि नाई??मदन भ’ण्डारिका ह त्याराको छानबिन हुन्छ कि नाई?निर्मला पन्तका बलात्कारी ह त्याराको छानबिन हुन्छ कि नाई?? उजुरी लिइन्छकि नाई? का’रबाही हुन्छ कि नाई?युवाको श्रम र सपनालाई बिदेशमा बेचेको छानबिन हुन्छ कि नाई?
पानीजहाज ल्याउँछु भनेर ढाँट्नेलाई छनबिन हुन्छ कि नाइ?रेल ल्याउँछु भनेर ढाँट्नेलाई छानबिन हुन्छ कि नाई?कोठाकोठामा खाना पुगाउँछु भनेर जनतालाई भोकै मार्नेको छानबिन हुन्छ कि नाई?? बिरामिको वहानामा बिदेश गएर उपचार गर्ने पैँसा कताबाट आयो छानबिन हुन्छ कि नाई? बिरामी भएर बेडमा सुतेर मि’र्गौला2चोटि फेर्दा 25 करोड सोझा जनता बाट लिएको छानबिन हुन्छ कि नाई?
करोडौँका गाडी चढेको,जन्मदिन मनाउन हेलिकप्टर चार्टर गरेको छानबिन हुन्छ कि नाई? उजुरी लिइन्छ कि नाई ?कारबाही हुन्छ कि नाई??जिन्दगीभरी बे’रोजगार भएर आफू करोडौँको गाडी चढेको छानबिन हुने कि नाई? पार्टिको नेताको नाममा काम केही नगर्ने सहर बजारमा घडेरी घर कसरी आयो छानबिन हुने कि नाइँ ? 50 औं बर्ष देखि राजनिती र घोषणा पत्रमा झुठो आस्वासन देखाएर जनता ठगे’को छानबिन हुन्छ कि नाई?
बिपि र मदन भण्डारिको ब्याज खा’एको छानबिन हुन्छ कि नाई? युवालाई कार्यकर्ता रुपि दा’स बनाएर आफू लु’टेरा ,भ्र’ष्ट, ठ’ग नेतारुपि ठेके’दार बनेर देश लु’टेको छानबिन हुने कि नाई??उजुरि लिने कि नाई? कार’बाही हुने कि नाई??बाँकी तपाइँहरु थप्दै जानू होला केके छान’बिन हुनु पर्छ?हेमराज थापा , त्रिभुवन बिस्वबिध्यालय किर्तिपुर,काठमाडौं ।”
Previous “प्रहरी परिसरमा आ’क्रमण गर्नेलाई किन प’क्राउ गरिएन? ज्वाला संग्रौला सहित टिमालाई फसाउन नखोजियोस्”- ज्ञानेन्द्र शाही
Next “सयौ बर्ष राज गरेका राजामहाराज,हरु बिश्वबाट पतन,भएर गए, यी भ्र’ष्टाचारिका’ मालिकहरु निश्चिय नै पतन भएर जानेछ्न’:-हिरा बोहरा